Avy amin'ny matetika fantatra amin'ny lafiny isa, ny farany no kihon-dalana amin'ny lahatsary Mampiaraka: NPR - NY LAHATSARY AMIN'NY CHAT. Mampiaraka an-tserasera!
Noho izany dia nitsangana izy ka nitondra anao - izy telemarketer. Izany no nitranga Ailsa Chang avy amin'ny NPR ny Vola tany peo tsy hitsahatra, noho izany dia nandeha mba hahitana izay antony.
AILSA CHANG, MPANORATRA ny Planeta Vola nanontany ny mpijery izy ireo raha naharay antso avy amin'ny finday isa izay ampiasain'ny orinasa.
nijery mahagaga toy izany koa ny finday isa
Ary latsaky ny adiny iray taty aoriana, ny kaonty Twitter, nipoaka. Aho ho azo antoka fa ny fehezan-dalàna sy mitovy telo voalohany namerenana. Ô, ry Andriamanitra, Eny.
Ary izaho ihany no tokony ho folo minitra alohan'ny izy ireo izay miantso anao, mba ho marina.
Miarahaba, izany no Elizabeth, Resorts, blah blah blah, Eny (mihomehy). ALEX NOSTRO: ny talata maraina, efa efatra samy hafa ny antso an-tariby izay naharitra valo minitra. Ny tiako holazaina, izy rehetra manomboka amin'ny fehezan-dalàna ary ny telo voalohany namerenana.
Izaho naka ny finday ary nijery ny mpiantso ny maro.
Ary mihevitra aho fa efa sahiran-maneho hevitra amin'ny tavako noho ny vadiko hoe:"Izay ny antsony? Ary hoy aho fa ny fahitàna azy aho, dia tsy noho ny isan'ny mamaky ny finday maro. CHANG: Chris Galileo, Omar Williams, Alex sy Notre Elion Johnson rehetra niharam-boina ny zavatra antsoina hoe akaiky-spoofing.
Izany dia rehefa mpiantso saron-tava ny tena finday isa amin'ny sandoka laharana finday izay manana ny faritra iray ihany ny fehezan-dalàna ary ny fari-fehezan-dalàna, toy ny anao.
Ny hevitra dia ny hoe ianao mety ho mora kokoa ny manao izany, satria ianao dia mety hieritreritra fa io antso io dia mety ho ny mpiara-belona na ny namana, ny sekoly ny olona fantatro.
Toa avy any amin'ny faritra fehezan-dalàna izay hita eto Washington, ary avy eo ny faritra fehezan-dalàna ho an'ny Hafa'. Ary fantatro fa zava-misy fa dia azo inoana fa tsy antso avy amin'ny birao. Fantatro, tsy fantatro, ny ankamaroan'ny olona dia tsy ho azo antsoina, ary indraindray fotsiny aho hamaly ho an'ny voly. Ary eto aho, handresy ny fialan-tsasatra amin'ny MARRIOTT. CHANG: ny Antso ka manelingelina i Paoly fa Izy dia avo roa heny nidina teo amboniny, ka ny ady mpandrava ambony AHITÀNA laharam-pahamehana.
Lalao Video, telemarketing, ary tsy misy.
fitarainana fa ny sampan-draharaha mandray avy amin'ny daholobe.
Ny teknolojia vaovao dia nanao spoofing mora kokoa sy sarotra kokoa ny fidirana. Tamin'ny taona lasa, ny olona dia hahazo ny momba ny an'arivony tapitrisa ny lahatsary daty isam-bolana. Izany dia ho lasa tena mahasoa koa ho mpisoloky. PAI: Ireo toby fiantsoana, izay nisokatra ao India ihany tamin'ny taona lasa ary izay dia ampiasaina isan'andro io no ampiasain'ny American mpanjifa izay, mazava ho azy, dia natahotra taorian'ny antso iray izay voalaza fa nandray avy ny hetra ny asa fanompoana, indrindra fa raha izy ireo zokiolona, na vao haingana no nifindra monina ny olona, etc, nandany vola, na dia tsy avy amin'ny fahatsapana ny andraikitra. CHANG: noho izany, lohataona ity, AHITÀNA nanomboka mijery ny fomba hahazoana ny finday mpanome tolotra mba hanakana ny antso amin'ny spooler. NIZARA: Noho ny antony samihafa, ny iray tamin'izy ireo, izay latsaky ny AHITÀNA ny fitsipika, airlines dia voatery handeha amin'ny alalan'ny rehetra ny antso izy ireo nahazo. Ankehitriny, mpandraharaha finday no navela hibahana ny sasany spoofs. Ny vahaolana farany, hoy i Paolo, dia rafitra vaovao fa tena afaka manamarina ny mpanjifa. PAI: Raha tianao, dia misy ny tsy manam-paharoa solon'anarana mifandray amin'ny ny nomeraon-telefaonina. Noho izany, rehefa misy antso atao amin'ny fampiasana ny finday maro, ny mpandray ny antso ho afaka matoky tanteraka fa ny tondro momba ny fitaovana nomena isa. Mino aho fa izany dia tsy impostor na ny olona iray izay misolo tena ny tompon'ny io isa io. HANOVA: Mandritra izany fotoana izany, AHITÀNA mampiasa latsaky ny nofinofy fomba hanohitra ny mpandrava. Ny firaketana an-tsoratra $ tapitrisa tsara vao apetraka amin'ny olona izay voalaza fa hosimbaina an-tapitrisany ny horonan-tsary tamin'ny taon-dasa. Ailsa Chang, NPR vaovao.
پاسخ: کسی به من بگویید که در آن شما می توانید در چت (چت و انجمن ها), من می توانم هر چیزی مناسب(
Fiarahana tsy misy sary maimaim-poana amin'ny chat roulette plus miaraka amin'ny ankizivavy ny lahatsary amin'ny chat tsy misy fisoratana anarana sy maimaim-poana chat online top Chatroulette toerana chat Mampiaraka manerana izao tontolo izao ny lahatsary adult Dating Chatroulette maimaim-poana online chat roulette video internet tsy misy fisoratana anarana